Samsung Droid Charge, astaamaha casriga cusub | Androidsis
Dhawaan la sii daayay Samsung DroidCharge wuxuu balan qaadayaa inuu noqon doono tartan xoogan aduunka casriga ah. Markii hore, Samsung ku suuqgeyn doono Mareykanka iyadoo lala kaashanayo wadaha Verizon Wireless, waxaana laga iibsan karaa websaydhka labada shirkadood.
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee ugu smartphone waa isku xirnaanta, tan iyo markii Samsung waxay soo saartay tiknoolajiyad u oggolaanaysa biraawsarka biraawsarka inuu la jaan qaado labada af HTML 5 iyo kan Shabakadaha Verizon Wireless 4G LTE, taas oo u oggolaan doonta isticmaalaha khibrad cusub oo la xiriirta xawaaraha isku xirka internetka, oo leh taageero ilaa 12 Mbps.
Dhinaca kale, Samsung DroidCharge Waxay yeelan doontaa shaashad taabasho ah oo ah Super AMOLED Plus 4,3-inji ah, laba kamaradood oo isku dhafan (hal gadaal 8 megapixel ah iyo mid hore oo ah 1,3 megapixel), processor 1 GHz oo laba-geesle ah, nidaamka hawlgalka mobilada ee Android 2.2 Froyo, sidaa darteed wuxuu taageero u heli doonaa muuqaalka iyo soo-saarista waxyaabaha laga sameeyay Flash, iyo Samsung taabashada adeegsadaha isticmaalaha, TouchWiz.
El Samsung DroidCharge Waxay sidoo kale u oggolaan doontaa la wadaagga xiriirka 4G ilaa 10 aaladood oo loo maro Wi-Fi, waxayna ku siin doontaa marin u helka Samsung Media Hub dukaanka dalxiiska si loo kireeyo loona iibsado dhacdooyinka taxanaha telefishanka ama filimada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Droid Charge, astaamaha casriga cusub